Ungagcina njani umatshini wokugaya we-gantry? -Dongguan Tuoyuan Precision Oomatshini Co.LTD.
Ikhaya > Iindaba > Iindaba Zoshishino
Ungagcina njani umatshini wokugaya we-gantry?
Ukukhuselwa okuqhelekileyo komatshini wokugaya kubaluleke kakhulu. Iingxaki ezininzi eziqhelekileyo zibangelwa kukutyeshela ukhuseleko oluqhelekileyo. Ukuba ukusetyenziswa komatshini wokugaya we-gantry kusetyenziswa ngokungqinelana nesikhokelo sokusebenza kwesayensi kunye nemigaqo yokhuselo kunye nemigaqo, inokuthintela abaninzi ekuthandabuzeni, ukunciphisa ilahleko zoqoqosho.
Ukuqhubekeka komatshini wokugaya u-Gantry luhlobo lwezixhobo eziphambili zokuqhubekeka kunye neqondo eliphezulu lokuzenzekelayo, isakhiwo esonakeleyo kunye nexabiso elibizayo. Idlala indima engapheliyo kwimveliso yanamhlanje. Ukuze unike umdlalo opheleleyo ekusebenzeni kwe-CNC yokugaya umatshini wokugaya, ukukhuselwa kwesiqhelo kunye nokugcinwa kwesixhobo somatshini kufuneka kwenziwe. Kubaluleke kakhulu ukunciphisa izinga lesiphene somatshini wokugaya we-CNC wokugaya
Ulwakhiwo gantry wokugaya umatshini processing yenziwe isakhelo gantry. Isakhelo se-gantry senziwe ngeekholamu eziphindwe kabini, imiqadi, imiqadi yokuqhagamshela, imiqadi ephezulu, isiciko esingaphezulu kunye neenkunzi zeenkunzi zentloko yokugaya ukwenza isakhiwo esiqinileyo. Imiqadi inyuka isihla kunye nomgaqo wesikhokelo sekholamu, kwaye umqadi othe nkqo ufakelwe imiqadi. Amandla aphakamileyo ohlukeneyo asebenza ngohlobo lwenkunzi yegusha ekruqulayo kunye nentloko yokugaya. Isilayidi sentloko esidikayo kunye nesilelayo sihamba ecaleni komgaqo kaloliwe wesikhombisi kwaye sihamba sinyuka sisihla. Ubume be-gantry buhamba ixesha elide ecaleni kwebhedi.
Xa usebenzisa umatshini wokugaya we-gantry, umsebenzisi kufuneka aqonde imigangatho yesixhobo somatshini esisetyenzisiweyo. Njengamandla e-othini yokuqhuba iimoto, uluhlu lwesantya sokujija, isantya sokondla, uluhlu lwee-stroke zesixhobo somatshini, amandla okuthwala okusetyenzwayo, ubungakanani besixhobo esiphezulu kunye nomgangatho ophezulu wesixhobo esivunyelwe yi-ATC. Kuyimfuneko ukuqonda indawo ekumgangatho ngamnye weoyile kunye noluphi uhlobo lweoyile egudileyo esetyenzisiweyo.
Ukongeza, gcina okusingqongileyo okujikeleze isixhobo somatshini sicocekile, kwaye umatshini wokugaya kufuneka ususe uthuli rhoqo ukuthintela indawo yokupholisa ukuba ingagungqi, ibangele ubushushu kwikhabhathi ye-CNC ukuba ibe phezulu kakhulu kwaye inkqubo ayinakusebenza ngesiqhelo. Iibhodi zesekethe kunye nezinto zombane kwikhabhathi yombane kufuneka nazo zivuthulwe rhoqo ukuqinisekisa ukusebenza kwesiqhelo kwenkqubo yombane.
Uphuhliso mkhuba elizayo CNC gantry wokugaya